MapBuilder wuxuu isu dhiibaa… mid kale - Geofumadas
MapBuilder is dhiibay ... mid kale
Luulyo, 2008 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Waa xanuun badan in la arko mashaariic xiiso leh oo jeexjeexay dharkooda oo aqbalay inay hawlgab noqdaan ... maalmo ka hor waxaan soo sheegnay daciifnimada mashaariicda aan lala xiriirin qorshe suuqgeyn xanaaq badan oo siiya waaritaan.
Xaqiiqdii maahan kiiska MapBuilder, oo ah mashruuc ku dhashay bishii Diseembar ee 2003, oo leh natiijooyin wanaagsan oo taasina waxay ku dhawaaqday inay heli doonaan nooca ugu dambeeya ee xasilloon laakiin aaney awoodi doonin inay sii wadaan mashruuca qaabkii ay u shaqaynayeen. Isugeyntiisii ​​ugu weyneyd ayaa la jirtay OpenLayers, kuwaas oo u muuqda in ay fahmaan ganacsiga; inkastoo hadda MapBuilder ma fududa in la raaco xawaaraha horumarka.
Markaa adoo samaynaya sixitaan, ma aha in ay ku tuuraan shukumaanka, halkii ay ka beddelaan habka iskaashiga ee OpenLayers doorka si loo isticmaalo khayraadka.
que Waxaan ahaa si fiican u sameeyaan Mapbuilder
Guusha ugu weyn ee mashruucan waxay ahayd in la abuuro codsi ka hooseeya laysanka LGPL ee loo oggolaaday iyada oo aan dhib badan la abuurin in la abuuro adeegyada khariidadda adeegga macaamiisha ee Internetka iyada oo la adeegsanayo is beddelka iyo XML ee hoos imanaya jawiga AJAX. sida laga soo xigtay dad badan, qaabkeeda la fududeeyay Model-View-Controller (MVC) waa wax fudud in la isticmaalo laakiin gaar ahaan baahi aad u yar oo loogu talagalay serverka.
Adeegyada khariidadaha waxaa ka mid noqon kara GML, WFS, GeoRSS, iyo sidoo kale Khariidadaha Google. Laakiin isku-darka is-dhexgalka bulshada ee OpenLayers waxaad sidoo kale kula xiriiri kartaa Yahoo, Virtual Earth iyo Multimap
Waxay leedahay taageero loogu talagalay daabacaadda xogta iyada oo loo marayo WFS ... oo ay ku jiraan adeegyada macaamil xawilaadaha (WFS-T)
Waxaad ku dhisi kartaa adeegyo adigoo isticmaalaya mawduuca mawduuca bogga (WMC) iyo Waxyaabaha Adeegyada ee Open Web Services.
Waxay ku haboon tahay dhowr heer oo OGC ah waana mashruuc taas OSGeo waxaa loo tixgeliyaa qalin-jab
hay Tusaalooyinka qaarkoodPlos si fiican ayaa loo rakibay, maxaa yeelay waxay ku guuleysatay inay dhexgalkeeda shaqadeeda ku sameyso noocyo ka mid ah Firefox (xoogaa jir ah), Internet Explorer iyo Mozilla ... sidaa daraadeed xaddidiisu ma aysan haynin wax ka beddelka nacasnimada ah ee Google iyo Microsoft ee daalacashadooda, aakhirka. Waxaan ku soo degnay wadada iyadoo runtii murugada leh:
"Way ku adag tahay qof inuu horumariso wax wanaagsan, oo lacag la’aan ah," maahan sababta oo ah ma awoodid, laakiin sababtoo ah waxkasta oo nolosha ah ayaa lacag ku kacaya ... xitaa waqti.
Dhibaatada ugu daran ayaa ah in sida codsigan oo kale ay jiraan dhowr, si shaki badan iyo murugo leh aan ugu sii jirno rajo ah in qof dib u soo celiyo… xitaa haddii ay tahay in ay noqoto qof sidaas xun Waxaan dhammeystiray suuqgeyn.
Waxaa cad in qaybta MapBuilder ay suurtogal tahay inay ahaato ugu dambeyntii, inkasta oo laga helo dhinaca OpenLayers waxaa suurtagal ah in lagu sii wado joogtayn joogto ah.
Via: James Fee
Post Previous" Hore Manifold; topology iyo qaabdhismeedka casriga ah
Post Next Microsoft wuxuu ku dhawaaqay TrueSpaceNext »
3 Jawaabo "MapBuilder wuxuu bixiyaa… midkale"
Antonio F. Rodríguez isagu wuxuu leeyahay:
Well, akhriska degan wargelinta asalka on MapBuilder bogga, waxay u muuqataa in aan u hogaansamaynaa laakiin ay go'aansadeen inay la midowdo mashruuca ah lakabyo Open la code la wadaago, horumarinta iyo tiro ka mid ah dadka isticmaala ka labo ka mid ah ka hor sano. Dhab ahaantii xidhiidhka ka dhexeeya labada mashaariicda ahaa mid aad u ballaaran oo ka doortay OpenLayers MapBuilder sida haya'ad engine. Oo waxaan idinku leeyahay in halkii waa isu tag oo u dhexeeya laba mashruuc, halkii failure ee mid ka mid ah, maxaa yeelay, ku dhiirigelinayaan in uu mayoríade MapBuilder parce in lagu daro OpenLayers.
Ugu dambeyntii, Uma malaynayo inay "xun" tahay cidda suuq geysa barnaamijkaas, waa nooc soosaar oo ka duwan.
Waa hagaag ... saaxiib ku jira koorso IDE ah oo ku taal Faransiiska, oo leh mashruuc laga dhisay Map Builder wuxuu ii sheegayaa in macallimiintiisu ay xuseen in MapBuilder uu sii socon doono ... oo uusan rumaysnayn qoraalka ugu horreeya ee uu akhriyo.
Nasiib intee le'eg ayaan u ahay in sidan oo kale la ii qabto ... si kastaba ha noqotee, waad ku mahadsan tahay caddaynta ... waxoogaa saxitaan ah ayaan ku sameeyay aragtidiisii ​​hore
XuRxO isagu wuxuu leeyahay:
mmm Ma aqbalayo.
Haddii uu akhriyo Cameron ee ku saabsan ka bixitaanka MapBuilder, wuxuu u arkaa in uusan dhab ahaantii dhicin dagaal, laakiin halkii ay u guurin lahaayeen dadaal.
MapBuilder dheer qaatay codesharing ah bulshooyinka OpenLayers sameeysa iyo labada wakhti la wada shaqeynaya tan iyo FOSS4G ee Lausanne (2006). Sidaa darteed, haddii ay iskaashi, qaybsiga code iyo Openlayers waxaa isuna saldhig weyn ee horumarinta, waa macquul in bulshada MapBuilder biiray OpenLayers ah.
Waxaan u maleynayaa in kiis kasta ay tahay guusha ay OSGeo ku leedahay labadan mashruuc ee hoos yimaada ceymiska maxaa yeelay waxay siisay dadka kalsoonida MapBuilder inay ka shaqeeyaan OL. Waxaa habboon in la akhriyo nalka wadahadalka ee liiska guud ee OSGeo halkaas oo aan u maleynayo in dhammaan arrintani ay ka fiicantahay.